အသံက | November 2019
သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာများအတွက်နားကြပ်အဖြစ်အသုံးပြုမယ့်မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်အတူနားကြပ်။ ဒါကြောင့်အားဖြင့်သင်တို့ကိုဂီတနှင့်ရုပ်ရှင်နားထောင်နိုင်သည်သာမက, ဒါပေမယ့်လည်းဆက်သွယ်ဖို့ - ဖုန်းပေါ်မှာစကားပြောဖို့ရန်, ကွန်ယက်ပေါ်မှာကစား။ လက်ျာဆက်စပ်ပစ္စည်းရွေးဖို့, သင်အကောင့်သို့သူတို့ရဲ့ဒီဇိုင်းနှင့်သူတို့အပိုင်အသံဝိသေသလက္ခဏာများကိုယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဆူညံသံပန်ကာမှုစနစ်ယူနစ် - ခေတ်သစ်ကွန်ပျူတာ၏စဉ်ဆက်မပြတ် attribute က။ ပြည်သူ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာဆူညံသံဆက်စပ်: ကအချို့နီးပါးအခြားသူများကိုတိုတောင်းတဲ့အချိန်များအတွက်ကွန်ပျူတာကိုသုံးပါနှင့်ဆူညံသံငြီးငွေ့ရရန်အချိန်မရှိကြပါဘူး, သတိထားမိကြပါဘူး။ ခေတ်သစ်ကွန်ပျူတာစနစ်များကို "လိုအပ်သောမကောင်းသောအ" အဖြစ် - လူအများစုဟာကစဉ်းစားလေ့ရှိပါတယ်။
မိုက်ခရိုဖုန်းရှည်လျားပြီးကတည်းကသင်၏ကွန်ပျူတာ, လက်ပ်တော့သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုမရှိမဖြစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာ "အခမဲ့လက်စွဲ" ၏တစ်ဦး mode မှာဆကျသှယျကူညီပေးသည်, ဒါပေမယ့်လည်းသင်, voice commands ကိုတဆင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုစီမံခန့်ခွဲသောစာသားမှမိန့်ခွန်းပြောင်းနှင့်အခြားရှုပ်ထွေးသောစစ်ဆင်ရေးလုပ်ဆောင်ခွင့်ပြုမသာ။ အများဆုံးအဆင်ပြေပုံစံအချက်အစိတ်အပိုင်းများကိုပြည့်စုံကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်သံကို gadget ကပေးကမ်းနေတဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်အတူနားကြပ်ဖြစ်ကြသည်။
နေ့သည်ကောင်းသော။ အိမ်သုံးကွန်ပျူတာ (နှင့်လက်တော့ပ်) ၏အများစုအဘို့အပီသို့မဟုတ်နားကြပ် (တစ်ခါတစ်ရံနှစ်ဦးစလုံး) နဲ့ချိတ်ဆက်။ အတော်လေးမကြာခဏအဓိကအသံကအပြင်တွင်, စပီကာကစားရန်စတင်နှင့်အခြားအသံများကိုအမျိုးမျိုး: မောက်စာစောင်ကိုဆူညံသံ (ကအလွန်ဘုံပြဿနာ), မတူညီသောအက်ကွဲ, တုန်လှုပ်, တစ်ခါတစ်ရံပျော့ပီပီ။
နေ့သည်ကောင်းသော။ ဤဆောင်းပါးတွင်မကွန်ပျူတာသံကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရနိုင်ပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်သောရန်အကြောင်းပြချက်များစုစည်းတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာဖြစ်ပါသည်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံသည်။ အကြောင်းပြချက်အများစုဟာ, လမ်းဖြင့်, သင်အလွယ်တကူကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြင်ပေးနိုငျပါသညျ! အတူစတင်ကျနော်တို့ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအကြောင်းပြချက်အပေါ်ကိုဆုံးရှုံးစေခြင်းငှါအသံများအကြားခွဲခြားရပေမည်။
စကားသံကိုလက်ထောက် "Yandeks.Stantsiya" အတူမာလ်တီမီဒီယာစနစ်၏အကျဉ်းချုပ်
ရုရှားရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီကြီး Yandex စျေးကွက်အပေါ် Apple က Google နဲ့ Amazon ကနေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဘုံအတွက် features တွေရှိပါတယ်ရာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် "စမတ်" ကော်လံ, ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ "Yandeks.Stantsiya" တန်ဖိုးရှိ 9990 ရူဘယ်ကိုခေါ်ကိရိယာ, သင်သာရုရှားတွင်ဝယ်နိုင်ပါတယ်။ မာတိကာ Yandeks.Stantsiya ထုပ်ပိုးနှင့်မီဒီယာစနစ်များကိုတက်ချိန်ညှိခြင်းနှင့်အသိဉာဏ်ကော်လံအဘယ်အရာကိုတတ်နိုင်သမျှ Yandex စီမံခန့်ခွဲခြင်း၏အသွင်အပြင်ကဘာလဲ။
အတော်များများက Laptop ကိုအသုံးပြုသူများကမကြာခဏတွေးမိ: "အဘယ်ကြောင့်အသစ်ကလက်တော့ rustle နိုင်သလဲ" ။ အထူးသဖြင့်လူတိုင်းအိပ်ပျော်အခါဆူညံသံညနေပိုင်းတွင်သို့မဟုတ်ညမှာသိသာဖြစ်နိုင်ပါသည်, သင်လက်ပ်တော့မှာနာရီစုံတွဲတစ်တွဲထိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ညအချိန်တွင်မဆိုဆူညံသံအားကောင်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြားလျှင်, ပင်အနည်းငယ် "buzz" သင်, ဒါပေမယ့်လည်းအတူတူပါပဲအခန်းထဲမှာသင်နှင့်အတူနေသောသူတို့အားမသာ၏အာရုံကြောပေါ်သရုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Connector ဂျက်, mini-jack နဲ့ micro-jack ကို (jack, mini-jack, Micro-jack ကို) ။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုတစ်မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်နားကြပ်နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို
မင်္ဂလာပါ မည်သည့်ခေတ်သစ်မာလ်တီမီဒီယာကိရိယာ (PC, laptop ကို, ကစားသမား, ဖုန်း, etc) အသံဖိုင်လက်ငင်းပြီ on: နားကြပ်ချိတ်ဆက်ဘို့, စပီကာ, မိုက်ခရိုဖုန်း, etc devices များ .. အသံ output ကို device ကိုချိတ်ဆက်ရန်, ထိုသို့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သင့်သည် - ထိုအခါကအရာအားလုံးရိုးရှင်းပုံပေါ်လိမ့်မယ်။ သို့သော်ထိုသို့အစဉ်အမြဲလူအပေါင်းတို့အားဒီတော့လွယ်ကူသည်မဟုတ် ... ကွဲပြားခြားနားသော Device များပေါ်တွင် connectors သောတကယ်တော့ - ကွဲပြားခြားနားသော (တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှတစ်ခါတစ်ရံတွင်အလွန်ဆင်တူသော်လည်း)!
ယခုငါအသံအတိုးအကျယ်ချိန်ညှိလို့မရဘူး - ထိုဗန်းထဲမှာအသံအိုင်ကွန် Gone ။ အဘယ်သို့ပြုသနည်း
ကောင်းသောအားလုံးနာရီ။ မကြာသေးမီက "ပြုပြင်" ရန်တောင်းဆိုမှုနှင့်အတူလက်ပ်တော့ဆောင်ခဲ့လေ၏။ တိုင်ကြားမှုများရိုးရှင်းသောခဲ့ကြသည်: က (နာရီအနီး) စနစ်ဗန်းထဲမှာအသံအိုင်ကွန်အဖြစ်အသံအတိုးအကျယ်ချိန်ညှိဖို့မထွက်လှည့်, ကရိုးရှင်းတဲ့မဟုတ်ခဲ့ပေ။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးကပြောသည်အဖြစ် "ကျွန်မဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး, ဒီအိုင်ကွန်ရုံပျောက်ကွယ်သွား ... " ။ ထိုအဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရပ်ကြီးသူခိုးအသံ? ဒါကြောင့်ထွက်လှည့်အမျှ🙂ကပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့5မိနစ်ကိုယူ။
မင်္ဂလာပါ ကျွန်မအသံဤမျှလောက်များစွာသောပြဿနာများဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆဘယ်တော့မှ! ဒါဟာတာတော့သေချာတယ်, ဒါပေမဲ့တကတကယ်တော့ဖြစ်ပါသည် - Laptop ကိုအသုံးပြုသူတစ်ဦးလုံလုံလောက်လောက်ကြီးမားနံပါတ်တစ်အချက်မှာ, ၎င်းတို့၏ device ကို၏အသံဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုနှငျ့ရငျဆိုငျနေကြတယ် ... ဒါဟာကြောင့်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များနှင့်အများစုမကြာခဏ, သင်က Windows အတွက်တူးဖော်ခြင်း, ပြဿနာကိုသင်ကိုယ်တိုင်ကုစားနိုင်ပြီး, ယာဉ်မောင်း setting များကိုစေနိုင်ပါတယ် ( ထိုသို့သောအားဖြင့်,) ကွန်ပျူတာဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်ချွေတာ။
ပြန်လည်နာလန်ထူ၏လက်တွေ့ကျတဲ့အတှေ့အကွုံ - Windows 8 ကိုအတူကွန်ပျူတာပေါ်မှာအသံမရှိပါတယ်
ကြိုဆိုပါတယ်! အတော်လေးမကြာခဏကျွန်မအလုပ်မှာ, ဒါပေမယ့်လည်းမိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်းမှသာကွန်ပျူတာကိုစိတ်ကြိုက်ရန်ရှိသည်။ နှင့်ဖြေရှင်းရမည်အသုံးအများဆုံးပြဿနာများ၏တဦးတည်း - အသံမရှိခြင်း (ထိုလမ်းဖြင့်, ကအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးများအတွက်ဖြစ်ပျက်) ဖြစ်ပါသည်။ ရုံမကြာသေးမီကငါအသံမရှိခဲ့သည်အတွက်အသစ်တခု operating system ကိုကို Windows 8, အတူကွန်ပျူတာကို set up - ထွက်လှည့်တစ်ဦးကို tick အတွက်ပဲ!